थप एक जनामा को’रोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि ! – Khabarhouse
थप एक जनामा को’रोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि !
Khabar house | २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार १०:५१ | Comments
काठमाडौं : नेपालगञ्जमा थप एक जनामा को;रोना भाइरसको सं’क्रमण देखिएको छ । १६ वर्षीय पुरुषमा को;रोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या १०२ पुगेको छ ।
यता, कोशी अस्पतालबाट आज ८ जना डिस्चार्ज भएका छन् । जसमध्ये ५ जना १७औँ दिनमा र ३ जना १६ औँ दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन् । योसँगै निको हुनेको संख्या ३० जना पुगेको छ। भेरी प्रादेशिक अस्पतालको ल्याबमा परीक्षण गर्दामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको हो। नेपालगञ्जमा भेटिएका सक्रमितलाई खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा राखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले पहिले देखिएका संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा थप संक्रमित फेला परेको बताए । हाल १५ हजार ६ सय २४ जना देशका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइनमा छन् भने १ सय ३५ जना आइसोलेसनमा छन्। उपत्यकामा तीन जना आइसोलेसनमा छन्। शुक्रबार नै कोसी अस्पतालतमा उपचार रत ८ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका हुन् । यो सँगै नेपालमा को;रोना संक्रमित भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या ३० पुगेको समेत प्रवक्ता डा देवकोटाले जानकारी दिए।